Waa Maxay Furuqa Adhigu? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ma Run Baa in Dhallinyarada Nigeria ay ”Ma Shaqaystayaal” Yihiin?
Cudurkan ay soomaalidu u taqaan furuqa, waa xanuun inta badan ku dhaca xoolaha aynu dhaqano ee adhiga (Riyaha iyo Idaha) sidoo kale waxa uu ku dhici karaa shimbiraha ay digaagu ka mid yihiin.
Haddaba xanuunkani waxa uu ku gudbaa taabashada nabarada, quudashada caanaha, saxarrada, kaadida iyo dhareerka bukaanka .
Dhareer, xummad iyo dareerayaal indhaha ka yimaada bukaanka..
Bukaanku marka uu dhinto waxa lagu arki karaa nabaro ku samaysma sambabada, dhuunta neef-mareenka iyo dalqada.
Cudurkani ma laha wax daawo oo sax ah, laakiin waxa wanaagsan in Tetracycline lagu duro bukaanka si aanay cuduro kale ugu raacin.
Iodine ayaa lagu taliyaa in nabarada jidhka ka soo baxa la mariyo.
In bukaanka meel gaar ah lagu xanaaneeyo ilaa 45 cisho marka uu bogsado ka dib, si aanu xanuunka ugu gudbin inta fayaw.
Gub oo aas hillibka xoolaha u dhinta cudurkan.
Waxa muhiim ah inaad neefka ka jabiso xumadda adiga oo siinaya daawada xummad jabinta ah (antipain drugs).
Tags: Waa Maxay Furuqa Adhigu?
Next post Waa Maxay Xanuunka Furuqa Lo’du?
Previous post Waa Maxay Cudurka Xummada Socdaalku?